Uhie Uhie bu n'obi ịkwụsị mmepe nke ihe nkesa X.Org | Site na Linux
Christian Schaller, onye na - eduga ndị otu egwuregwu kọmpụta na Red Hat na desktọọpụ Fedora, na nyocha nke atụmatụ maka ihe desktọọpụ na Fedora 31, kwuru uche okpu Uche ịkwụsị ifịk ifịk na-emepe emepe X.Org nkesa na-arụ ọrụ ma ga - ejedebe naanị iji jigide isi koodu dị ugbu a na nbibi.
Ka ọ dị ugbu a, Red Hat na-enye onyinye dị mkpa maka mmepe nke sava X.Org ma na-ejigide nkwado ya yabụ, ọ bụrụ na a kwụsịtụrụ mmepe, ọ ga-abụ na enweghị ike ịpụtapụta ihe nkesa X.Org dị mkpa ga-aga n'ihu.
N'otu oge ahụ, n'agbanyeghị ịkwụsị mmepe, nkwado Red Hat nke X.Org ga-aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe ngwụsị nke usoro ndụ RHEL 8 nkesa, nke ga-adịgide ruo 2029.
1 Mmepe nke X.Org adịlarị ntakịrị
2 Uhie okpu na-ahọrọ ilekwasị anya na mbọ ya na Wayland
Mmepe nke X.Org adịlarị ntakịrị
Enweelarịrị nguzo na mmepe nke sava X.Org. N'agbanyeghị ọnwa isii ntọhapụ nke ejiri mee ihe na mbụ, nke ikpeazụ dị ịrịba ama nke X.Org Server 1.20 wepụtara ọnwa 14 gara aga na nkwadebe maka mbipute 1.21 na-akwụsị.
Ọnọdụ ahụ nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ obodo ọ bụla megidere iji nọgide na-abawanye arụmọrụ nke sava X.Org, Mana inye mgbanwe zuru oke site na nnukwu ọrụ gaa Wayland, o yighị ka a ga-enwe onye ọ bụla.
Red Hat na-elekwasị anya ugbu a iji melite ọrụ desktọọpụ nke Wayland. A na-atụ anya na a ga-etinye sava X.Org n'ime ọnọdụ mmezi mgbe edozi nsogbu nke iwepụ kpamkpam ịdabere na ngwongwo X.Org na ijide n'aka na akwara Gnome amalite na-enweghị iji XWayland, nke chọrọ ịmegharị ma ọ bụ wepu njikọ ndị fọdụrụ na X.org.
Njikọ ndị a fọrọ nke nta ka ewepụ ha na Gnome Shell mana ka na-anọgide na ntọala Gnome.
Na Gnome 3.34 ma ọ bụ 3.36, a na-eme atụmatụ iji kpochapụ njikọ X.Org ma hazie XWayland ntọhapụ nke ọma, mgbe mkpa maka ihe mejupụtara iji hụ na ndakọrịta X11.
Uhie okpu na-ahọrọ ilekwasị anya na mbọ ya na Wayland
E kwukwara mkpa ọ dị idozi ọtụtụ nsogbu pụtara ìhè na Wayland, otu esi arụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA ma mezie ihe nkesa XWayland DDX iji hụ na mbido ogo X dị na gburugburu ebe obibi Wayland.
N'ime ọrụ 31 a na-eme maka nkwadebe maka Fedora, XWayland na-emejuputa ikike nke iji ngwa X rụọ ọrụ nwere ikike mgbọrọgwụ. Mwepụta dị otú a na-enyo enyo site n'echiche nchebe, mana ọ dị mkpa iji hụ na ndakọrịta na mmemme X, nke chọrọ ikike dị elu.
Ihe ịma aka ọzọ na-eme ka nkwado Wayland dị na ọbá akwụkwọ SDL, dịka ọmụmaatụ, iji dozie esemokwu na-abawanye ụda mgbe ị na-agba ọsọ egwuregwu ndị okenye na-agba na obere mkpebi ihuenyo.
Ọzọkwa, Enwere mkpa iji melite nkwado maka ọrụ Wayland na sistemụ nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA:
ọ bụrụ na Wayland nwere ike ịrụ ọrụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala dị otu a ogologo oge, mgbe ahụ XWayland na nhazi a enweghị ike iji ike ngwanrọ ngwanrọ maka eserese 3D (a na-ezube ịnye ikike ibudata x.org NVIDIA ọkwọ ụgbọala maka XWayland).
Ọzọkwa, ọrụ na-aga n'ihu iji dochie PulseAudio na Jack na PipeWire Media Server, nke na-agbasawanye ikike nke PulseAudio na vidiyo vidiyo na nhazi ụda na obere njedebe, na-echebara mkpa nke usoro nhazi ụda nke ndị ọkachamara, yana ịnye usoro nchekwa echekwara maka njikwa njikwa ngwaọrụ.
N'ikpeazụ dị ka akụkụ nke usoro mmepe Fedora 31, ọrụ a lekwasịrị anya na iji PipeWire iji kesaa ohere ihuenyo na gburugburu ụzọ nke Wayland, gụnyere iji usoro Miracast.
para A na-ezube Fedora 31 ịgbakwunye ikike ịmalite ngwa Qt na nnọkọ Wayland nke Gnome. iji Qt Wayland ngwa mgbakwunye kama XCB ngwa mgbakwunye iji X11 / XWayland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Uhie okpu na-ezube ịkwụsị mmepe nke ihe nkesa X.Org